Yangon Chief Calls for Creation of Gems and Jewelry Market | Myanmar Business Today
HomeBusinessYangon Chief Calls for Creation of Gems and Jewelry Market
Yangon Chief Calls for Creation of Gems and Jewelry Market
Yangon Chief Minister U Phyo Min Thein recently called for the implementation ofagems and jewelry market that can accommodate foreign and local traders.
“Myanmar produces precious stones and jewelry. Hpakant mines, for example, produce jade while Mogok is well-known for its rubies. The country is known for its rich natural resources. But we have failed to buildastrong market for gems and jewelry,” he said at the third Yangon International Gems and Jewelry Fair on January 10.
The chief minister said the relevant Union-level ministries need to adopt plans and regulations to make it easier for importers and traders who purchase gems and jewelry at trade fairs to take their purchases out of the country.
The regional government is committed to supporting international gems and jewelry fairs, he said.
The Myanmar Gems and Jewelry Entrepreneurs Association organizes an international expo every year withaview to fosteringastable gem and jewelry market.
This year’s expo featured 120 booths dedicated to finished gems and jewelry products.
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပြည်တွင်းပြည်ပ မှ လာရောက်ရောင်းချနိုင်သည့် ကျောက်မျက်ရတနာစျေးကွက်တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ရန် ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်း
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပြည်တွင်းပြည်ပ မှ လာရောက်ရောင်းချနိုင်သည့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ကျောက်မျက်ရတနာစျေးကွက်တစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် Lotte ဟော်တယ်တွင် ပြုလုပ်သည့် တတိယ အကြိမ်မြောက် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထည်နှင့် လက်ဝက်ရတနာပြပွဲတွင် ပြောသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံက ကျောက်မျက်ရတနာထွက်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ကျောက်စိမ်းနဲ့ပါတ်သက်ရင်လည်း ဖားကန့်ဒေသမှာ ကျောက်စိမ်းများစွာ ထွက်ရှိပါတယ်။ နောက်ပတ္တမြား ဆိုရင်လည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးက သိနေတဲ့ မိုးကုတ်ပတ္တမြား ဟာနာမည်ကြီးတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပြင် အခြားသော ကျောက်မျက်ရတနာတွေလည်း ထွက်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာ ကျောက်မျက်ရတနာတွေ ထွက်ပေမယ့် စျေးကွက်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အားနည်းနေခဲ့တယ်။”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ယခုလို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ကျောက်မျက်ပြပွဲများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်ပမှ ကျောက်မျက်ရတနာ ပစ္စည်းများ တင်သွင်းလာနိုင်ရန် ၊ ပြည်တွင်းမှ ဝယ်ယူသွားသည့် ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးဖြင့် စနစ်တကျ စီမံချက်များ ချမှတ်ပေးနိုင်မှသာလျှင် အောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။
တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအနေဖြင့် တိုင်းအတွင်း အဆိုပါ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ကျောက်မျက်ပြပွဲများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် အစဥ်တစ်စိုက် တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်မူများ ပြုလုပ်လာလျှက်ရှိနေကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောသည်။
ယခုကျင်းပသည့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထည်နှင့် လက်ဝက်ရတနာပြပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကျောက်မျက်ရတနာ စျေးကွက် ရာနူန်းပြည့် ဖြစ်ထွန်းပြီး တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်မှ သိရသည်။
အဆိုပါပြပွဲတွင် ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထည်နှင့် လက်ဝက်ရတနာ ပြပွဲခန်းပေါင်း ၁၂၀ ကျော် ပါဝင်ပြသခဲ့ပြီး မျက်မြင်စနစ်ဖြင့် စျေးညိူနိူင်းကာ တိုက်ရိုက်ရောင်းဝယ်နိုင်သော စနစ်နှင့် လေလံ စနစ်တို့ဖြင့် ရောင်းချခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
Previous articleVillages Get Electricity from $2.6 Million Solar Plant
Next articleInfrastructure Agreements, Diplomatic Milestone Highlights of Xi’s Visit